भविष्यको ट्रेनको एक जिम, भिडियो गेम कोठा र कार्य क्षेत्र हुनेछ ग्याजेट समाचार
रेल भूमि अवतरणको एक माध्यम हो जुन दैनिक आधारमा अधिक प्रयोग गरिन्छ। मुख्य दावी यो हो कि हामीले व्यक्तिगत सवारी साधन ग्यारेजमा छोड्छौं र हामी वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न प्रबन्ध गर्दछौं। त्यस्तै, यसले देशका धेरै भागहरूमा वा यसको बाहिर पनि पुग्न सुविधा दिन्छ। जे होस्, संसार परिवर्तन हुन्छ र हामी यसको साथ बदल्नु पर्छ। यो कसरी सुरु हुन्छ जर्मनीको मुख्य रेलवे कम्पनी डाउश बाहन द्वारा प्रचारित "Ideenzug प्रोजेक्ट" को प्रस्तुतीकरण।
यस परियोजना को लागी, सबै भन्दा माथि, यात्री डिब्बे को भित्री को पुन: सार्न को लागी। यो सत्य हो कि हामीसँग लामो दूरीको उच्च-स्पीड रेलहरू वर्षौं भइसकेका छन्। यद्यपि यो सत्य हो कि रेल उद्योगले काफिलेको भित्री भागमा नयाँ शर्त लगाउनु पर्छ। अझ बढी, यो सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका लागि दावी हुनुपर्दछ। र यस्तो देखिन्छ, भविष्यको ट्रेन यस महत्त्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी परियोजनाबाट आउन सक्छ.
इडेन्जुगमा उनीहरूले जनताको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न समाधानहरू प्रस्ताव गरे। डोइचे बाहनबाट उनीहरूलाई थाहा छ कि सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरू दिनहुँ रेलहरूमा चल्दछन्: सम्पूर्ण परिवार, व्यापारी, खेलाडी, आदि। र यही कारणले गर्दा भित्री अधिकतममा अनुकूलित हुनुपर्दछ।
सब भन्दा चाखलाग्दो प्रस्ताव मध्ये im को होइनडोर जिम लगाउनुहोस् वा सबै सिटहरूमा स्क्रीनहरू राख्नुहोस्। वा, यदि तपाइँको मनपर्ने फुटबल, बास्केटबल वा कुनै अन्य लोकप्रिय खेल टोली एक प्रतियोगितामा डुबेको छ र त्यो खेल खेल्दै गर्दा खेल्दछ, किन यी सामग्रीहरूको मजा लिन ठूलो स्क्रिन छैन?
घरका कान्छो वा कान्छो सदस्यहरू पनि विचार गरिएको छ। यदि यात्रा धेरै लामो छ भने, तिनीहरूलाई यात्रा भर तिनीहरूको सिटहरूमा बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो तरिकामा, उत्तम हो समयको लागि तिनीहरूमा स्क्रीन र खेल कन्सोलको साथ ठाउँ अनुकूलन गर्नुहोस्.
अब, यदि यो कामको कुरा आउँछ भने, Ideenzug सँगसँगै कामदारहरूको लागि एक समाधान छ। यो सत्य हो कि यी मार्गहरू - AVE यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो - काम अगाडि बढ्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। सबै भन्दा राम्रो छ गिलास विभाजनको साथ ठाउँ अनुकूलन गर्नुहोस् र ती «MyCabin as को रूपमा बप्तिस्मा छन्।। यहाँ प्रयोगकर्ता आराम गर्न, काम गर्न वा अन्य यात्रुहरू द्वारा न विचलित संगीत सुन्न सक्दछ।
रिलक्सेशन, जैसा कि तपाईं पहिल्यै जाँच गर्दै हुनुहुन्छ, मुख्य दावीहरू मध्ये एक हो। र यसैले Ideenzug परियोजनामा ​​केहि समावेश गर्दछ एर्गोनोमिक सीटहरू जुन रेलको ठुलो विन्डोजको सामना गर्न स्विइवल गर्न सकिन्छ। यस तरीकाले तपाईं पानोरामिक दृश्य र कम आवाजले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। हो, कम आवाजले यसमा हेडरेस्टहरू समावेश हुनेछ जुन प्रक्षेपणको साथ परिवेशी शोरलाई कम पार्दछ, जुन यात्रीलाई पूर्ण यात्राको मजा लिन सक्दछ।
अन्तमा, विचार जसले हामीलाई सबैभन्दा धेरै चकित गर्‍यो एक हो त्यो सन्दर्भित गर्नेलाई साना केबिनहरू जहाँ तपाईं २० मिनेटको झोला लिन सक्नुहुनेछ यात्रा पुनः सुरु गर्नु अघि। बिहान को ती सबै सार्वजनिक यातायात यात्रीहरु आफ्नो सीट मा एक झोला लिन को लागी आरामदायक को कोशिश गर्न को लागी देखेको छैन? अर्को शब्दमा, यो प्रयोग हुने थियो - विशेष गरी बिहानको समयमा, जब यात्रुले आफ्नो काम बदलाव असीमित घण्टामा सुरु गर्छन् र जसमा उनीहरू अबाधित आराम गर्न सक्दछन्।
सामान्य विचारहरूमा, तपाईं यस लोकप्रिय भूमि यातायातमा नवीन बनाउन चाहनुहुन्छ। यो एक लक्जरी सेवा बिना - सायद टिकटको मूल्य केही बढ्न सक्छ - तर बदलामा तपाईं भित्र यी सबै तत्वहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, कम्पनीबाट यो सल्लाह दिइन्छ कि एकै ट्रेनमा एकै समयमा यी सबै अवधारणाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिएको छैन, तर ग्राहकको आवश्यकतालाई सबै विचारहरू अनुकूलन गर्न। त्यसो भए यसले सर्वेक्षणहरू, साइटमा परीक्षण, र सुधारको लागि अग्रसर गर्दछ। अर्कोतर्फ, यस क्षणमा उनीहरू प्रस्तुत भइरहेका विचारहरू हुन् तर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र अभ्यासमा राख्ने कुनै समय मिति तय गरिएको छैन। ती सबै मध्ये कुन ट्रेनमा जानका लागि उत्तम विचार देखिन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » भविष्यको ट्रेनमा जिम, भिडियो गेम कोठा र कार्य क्षेत्र हुनेछ